Izibalo - Uhlelo lwamazambane
Ingqungquthela "Ama-pesticides-2020": imiphumela
Imisebenzi yokulwa nokulahlwa kwemithi yokubulala ukhula yaseYurophu ikhuthaze ukudluliselwa komkhiqizo wayo eRussia
Leli hlobo laliyimfudumalo enkulu eNyakatho Nenkabazwe emlandweni wokubhekwa kwesimo sezulu.
Omunye wemiphumela engahlosiwe yobhadane lwe-COVID-19 kube ukwanda okukhulu kwesidingo sezithelo nemifino. Ngenxa yalokho, abakhiqizi abaningi bamazambane abahlanganisiwe ...
"Uhlelo lwamazambane". Siletha ndawonye ochwepheshe abavela kuwo wonke umhlaba
Umagazini wePotato System ushicilelwe kusukela ngonyaka we-2009. NgoFebhuwari 2020, umagazini wagxuma ngokunamandla wangena esikhaleni se-Inthanethi: wethula entsha yesimanje ...
Inkampani ka-Agasti ibhale izinambuzane eziyingozi kakhulu ezibeka engcupheni isivuno ngo-2020. Ukugxila kulokhu ...
Umqondisi weSikhungo Sokucwaninga Ezolimo okwenziwa nguMnyango Wezolimo uFirdovsi Fikretzade utshele ngalokhu. Ukugcizelele ukuthi ukufunwa kukotini kanye nama-hazelnuts ...
Okokusebenza okungalungile kwelebhu yasekhaya kanye nemihlahlandlela yesikhathi esisebenzayo ayikuvumeli ukulawulwa okusebenzayo kwekhwalithi yokubulala izinambuzane eRussia ...
Ngokuya kweCentre for Market Economics, imakethe yokuqamba amazambane eRussia ikhula ngesilinganiso sama-30% ngonyaka futhi ekugcineni ...
Ochwepheshe begatsha le-FSBI "Rosselkhoztsentr" eKrasasarsarsk Territory sebeqalile ukuhlola amazambane - ukuhlolwa kwama-plantings ukuze kusungulwe ukuhlanzeka kwe-varietal kanye ...
Ngokusho kwengosi ye-EastFruit, ngokusho kwe-Association of Retailers of the Republic of Moldova, ngisho ehlobo ngaphezulu kwezinga le-60 lezitolo ezenziwa ezweni zakhiwa ...
E-Russia, isidingo sebhizinisi elenzelwe emkhakheni wezolimo selukhulile
Intshalo ekuthengweni kwamabhizinisi aqediwe ezolimo eRussia akhule kwikota yesi-15 ngamaphesenti ayi-2020 uma kuqhathaniswa nekota yokuqala ka-XNUMX….
I-CLIMMAR poll: I-80% yabathengisi bezolimo baseYurophu bayayizwa imiphumela yobhubhane
Ucwaningo olwenziwe yi-European CLIMMAR Dealer Association lukhombisa ukuthi cishe 80% yezinkampani ezisebenza ngokuthengisa imishini yezolimo nemishini ithola imiphumela emibi ...